Aha! Jokes, Satire » အလကား​ကျော်​စွာ ​ကိုရင်​ဆာ	16
Posted by ဖိုးသာထူး on Jan 8, 2016 in Aha! Jokes, Satire | 16 comments
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .နာမည်ပြောင်းထားတာကိုး။ ဈာန် ဆိုတော့ ကဗျာဆရာလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့နော်။ ဟိတ်တအားကောင်းသွားပြီ။ နာမည်ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ကလောင်ကမပြောင်းတော့ ရီမြဲရီနေရတယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ဗျိုး။
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: နာသာဆို ကေတီဗီ မာဆတ် နိုက်ကလက် အစုံလိုက်ပို့အောင်
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: နာ့လို ဂန္ထဝင် ဆာရေးစရာ အူးမြောက်မြောက်ကျ မပေးဝူး
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: နာသာလရင် အီစုနဲ့ အထိုက်တမ်စုန်း
alinsett says: ခွိ….
– င်္ လေး ကျန်ခဲ့တာနဲ့… အဓိပ္ပါယ်တွေ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .နာ့ကိုလည်းဘူ့မှဘွဲ့မပေးဂျဘူး…ကွကိုယ်ပဲပေးလိုက်တော့မယ်
Mike says: .သရော်စာပီပါပေ့ဗျာ…အဲ့လိုဟာသလေးတွေမဖတ်ရတာတောင်ကြာပေါ့
.သတိရလျှက်ပါဈာန် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တစ်ရက်လောက်ဆုံကြအုံးစို့
naywoon ni says: သဂျီးတို့မျက်​နှာလိုက်​ချက်​က​တော့ ကမ်းကုန်​ဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: .အလဂါးကြော်စွာ
kai says: ပြောသာပြောတာ… အဲဒီ အ,လင်္ကာသမားတွေ.. နောက်အစိုးရလက်ထက်မယ်.. အနုပညာသေဖို့များသွားသပေါ့…။
ဒီနှစ်ထဲ.. ကျုပ်တကယ်ပေးမယ့်… ဂျာနယ်လစ်ဆုသာမှန်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အလကားကြော်စား ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်ရယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ ဘွဲ့က သမဒ က ပေးရတာလား။
Ma Ma says: ကျော်စွာဘွဲ့တွေ များလာတဲ့ လက်သည်အစစ် ခုမှပဲတွေ့တော့တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ဒီလောက်ဘုံးဘောလအောလုပ်သွားတာ
CharTooLan says: အလဂါးဘွဲ့တွေက အလဂါးရတာရော ဟုတ်ရဲ့လား :D